Radio Devdaha सामाजिक व्यक्तित्व जीवलाल पराजुलीको निधन
मंसीर १४ । नेपाली काग्रेसका महासमिति सदस्य देवदह–५, निवासी जीवलाल पराजुलीको निधन भएको छ । गत साउन ४ गते देखि मष्तिकघात भई उपचारको क्रममा निधन भएको हो । देवदह आर्दश बहुमुखी क्याम्पस संचालक समितिका अध्यक्ष समेत रहनु भएका पराजुलीको ६९ बर्षको उमेरमा निधन भएको हो । नेता पराजुलीले पञ्चायत कालमा समेत वडाअध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । पराजुलीको ५ भाई छोरा र एक जना छोरी हुनु हुन्छ । पराजुली मष्तिकघात भएपछि विभिन्न अस्तालमा उपचार पछि केही दिन देखि घरमै स्वास्थ्य लाभ गरीरहनु भएको थियो । सामाजमा सामाजिक व्यक्तित्वको रुपमा परिचित पराजुलीको सांस्कृति परम्परा अनुसार चितवनको देउघाटमा अन्तेष्टि गरिएको छ ।
यसैगरी रेडियो देवदहका सल्लाहकार जीवलाल पराजुलीको निधनमा रेडियो देवदहले शोक वक्तत्व जारी गरेको छ । रेडियो देवदह संचालक समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी सल्लाहकार पराजुलीको निधनले सिंगो रेडियो परिवार स्तव्ध भएको जनाउनु भएको छ । सल्लाहकार पराजुलीको निधनले रेडियो देवदहलाई अपूरणिय क्षति पुगेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गर्नुभएको छ । रेडियो देवदहको स्थापनाकाल देखि नै देवदहको विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएका पराजुलीको निधनले रेडियो देवदह परिवार स्तव्ध भएको विज्ञप्तीमा जनाउनु भएको छ । अध्यक्ष पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा पराजुली प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन प्रति हार्दिक समवेदन प्रकट गर्नु भएको छ ।
यसैगरी नेपाली काग्रेस जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाले पराजुलीको निधन प्रति गहिरो समवेदना व्यात्त गर्दै उहाको सम्मानमा आज जिल्ला,क्षेत्र,नगर र सम्पुर्ण वडामा कुनै पनि औपचारीक कार्यक्रम नगर्ने र पार्टीको आधा झण्डा झकाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
यसैगरी पराजुलीको निधन प्रति ने. वि. संघ आदर्श बहुमखी क्याम्पसले पनि गहिरो समवेदना व्यात्त गरेको छ ।